Deal of Century “Peace Plan” – Ahmed Y. Hassan
Deal of Century “Peace Plan”
1898 ayuu shir uqabtay Theodor Herzel wuxuuna dhawaaqay shir lagu asaasay ururka zionistka oo Gurion madaxkanoqday. Waxaa garabtaagna ingiriiska iyo reer dunida lacagta badan Rodchild. Waxay kuwadasocdaan in yahuuda dhulka falastiiniyeenta lasiiyo, Theodor oo madax u ahaa zionistka ayaa suldaan Mehmet 8 uyimid wuxuu kuyidhi naga iibiya dhul aad gacanta kuhaysaan ee falastaan, suldaanku wuu kadiiday Theodor inuu dhulka kuwareejiyo zioniska falastiiniyiintina wuxuu kuyidhi haday idiinyimaadan yahuudu haka iibinina dhulkiina. Waxkasta way kubaayaceen inuu suldaanku ka aqbalo codsiga, lakinse suldaanku wuxuu fahamsanaa sirtooda.
Durbaanki colaada ayuu tumay Theodor colaad iyo in awooda cismaaniyiinta meesha lagasaaro ayaa laqorsheeyey siyaasad aan xataa taarikhyahanka cadiga ahi fahmaayo ayaa lamaleegay dawlado ayaa madax laysu galiyey, dajjal baa taliyey, friimayson baasodulay, carab baa wax looshegay, faalba ladhigay, samadaa dhawaaqay, bilaalba adimay suldaanki ayey jilbaha dhulka ugu dhufteen, Mustafa Kemaal Ataturk ayaa loocimaamaday.
Sidii cismaaniyiinta jilbaha dhulka loogu dhuftay jaahwarer iyo hogaan la’aan baa muslimiinta kudhacday carab aan Khayr badan lahayn oo diinta ingadhaxaysa asturayso ayaa wax lawaydiiyey. Waxaynu ka makhraati kacaynaa in tarikhdu soo noqnonoto oo nina magac xumo baa karaacda oo waa layeesha waxna waa looyedhiya hadii layidhaahdo dhulka aad leedahay ee Alle kusiiyey noogatag wuuyeela ninna sida Suldaan Mehmet oo diiday inuu falastiin yahuuda ka iibiyo boqortoyadiisi baa ku burburto. Waxaynu ka makhraati kacaynaa in taarikhdan isshabahda ee loolakala yimid Turkeyda iyo carabta Ninba meel iskataagay oo turkeydiina sharaf karaacday carabnna dulinimo kasooracday.
Boqorka joordan awowgii, reer alusucuud iyo carab badankeedu waxay lasafteen ingiriiska iyo Richard prince of Arabia waxayna lugta uqabten yahuudi suldaanku kadiiday in dhulka carabta laga iibiyo zionistka iyagiina waa looso adeegsaday, qaaxologyada tii ugusaraysay. Sidii looriday cismaaniyiinta islaamku balaa cidiyo ayey ahaayen waxaana ka gurayey cidiyahay islamka carabta. Taageridii ingiriiska iyo yahuuda wadasocda carabi waxba kumahelin aan ahayn gaadhi dhalaalaya iyo eerkondishan qabow, iminkana waxba kuma helayaan mareekan iyo yahuud wadasocdaan aan ahayn baldilaad. Suldaan Nuur Amaan iyo Siyad ayaa dhaamay carab.
Posted on January 29, 2020 Author Ahmed Y. Hassan
Previous Previous post: Thanks for Being Late By Thomas Freidman
Next Next post: Ways to Read More!